မိသားစု Guy | Coinfalls ကာစီနို
မိသားစု Guy အတန်းနှင့်ထုခစျြသောအလွန်လူကြိုက်များတီဗီရှိုးဖြစ်ပါသည်. IGT ပြပွဲခူးနှင့်ကထလုပ်တဲ့ slot ကဂိမ်းသို့နှင့်သောကစားသမားများကကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်. အဆိုပါကစားသမားဒီ slot ကဂိမ်းကျော် Gaga သွားကြသည်. ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံး features နဲ့ပိုကြီးကိုအနိုင်ပေးအချို့ကိုနှင့်အတူကစားသမားတင်ဆက်.
မိသားစု Guy ထိုဂိမ်းကမ္ဘာ၏ကြီးမားသောဖေဖေကတီထွင်နေသည်, IGT. IGT သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဂိမ်းနည်းပညာလူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်း slot ကဂိမ်း developer များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. IGT အစောပိုင်းက Gtech S.p.A နှင့် Lottomatica S.p.A အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်. ဒါဟာလန်ဒန်မြို့တွင်ဌာနချုပ်နဲ့ရောမမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်အဓိကရုံးများနှင့်အတူနိုင်ငံစုံဂိမ်း developer များဖြစ်ပါသည်, Las Vegas တွင်နှင့် Providence.
ထိုနှစျတှငျ 2015, ဒီကုမ္ပဏီနိုင်ငံတကာဂိမ်းနည်းပညာလွှဲပြောင်းယူနဲ့ဒီကုမ္ပဏီ၏နာမကိုမွေးစား.
မိသားစု Guy ဘရိုင်ယန်မှည့မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတစ်လျှောက်ခရီးကစားသမားကြာ, ပတေရုသ, Lois, ခရစ်, Stewie, Meg နဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ. ဒါဟာငါးရက်ကြောင့်မှားယွင်းသုံးဆယ် paylines ရှိပါတယ်. ဒါဟာအားလုံးပျော်စရာအကြောင်း, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ငွေ.
အဆိုပါသင်္ကေတအ Griffin မိသားစုထံမှအပေါငျးတို့သဇာတ်ကောင်ပါဝင်. အခြားသင်္ကေတများကို Quagmire ပါဝင်, ဂျိုး Swanson နှင့် Cleveland.
အထိုင်၏ဆောင်ပုဒ်သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. IGT ဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြီးစွာသောအလုပ်ပြုတော်မူပြီ. အဆိုပါ animations တွေကိုလုံးဝ enthralling များမှာ. ပြီးသားတီဗီရှိုးနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းကြသူအဆိုပါကစားသမားအသံကိုနှင့်အသံအသိအမှတ်ပြုရန်မယ်လို့. အဆိုပါ slot ကဂိမ်းကစားသူအများအပြားအံ့သြဖွယ်အပိုဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်း. ဆုကြေးငွေကျည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒီဖျော်ဖြေမှုဂိမ်းထဲမှာတိုးပွားစေနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လှည့်ခြင်းများ. ဤအင်္ဂါရပ်ကစားသမားကကြီးတွေဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းပေးနှင့်လည်းပျော်စရာများစွာသောငွေပမာဏများ.
အဆိုပါကစားသမား Amazing Guy Wild တူ features တွေရလိမ့်မယ်, ကမ္ဘာ့ဖလားအပိုဆု Feature ကို, အဆိုပါမူး Clam အပိုဆု, ကြက်သား Fight အပိုဆု, Lois '' ဟော့အခမဲ့လှည့်ဖျားအပိုဆု, ပေတရု၏ Feature ကို, Stewie ရဲ့ Feature ကို, ဘရိုင်ယန်ရဲ့ Feature ကိုနှင့် Lois '' Feature ကို. ဤသူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်တွေအတော်လေးပျော်စရာဖြစ်ကြပြီးအမှန်တကယ်ငွေသားဆုများနှင့်အတူမိမိအဘဏ်ကဖြည့်ရန်ခုန်ခြင်းနှင့်မှတ်သားခြင်းအားဖြင့်ကစားသမားကိုကူညီ.
မိသားစု Guy ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. စိတ်ဝင်စားစရာကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လည်းအကျိုးအမြတ်စေ features တွေ၏လုံလောက်သောရှိပါတယ်. ဒါဟာတစ်ဦးလွယ်ကူသောရှာနေကစားသမားများအတွက် play ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်- breezy နှင့်ပျော်စရာဂိမ်း.